देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका २७ सांसदको हस्ताक्षर !
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दै सत्तारुढ नेकपा एमालेका २७ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा देउवासहित, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संघीय परिषद् अध्यष डा. बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरुबीच छलफल भएको थियो ।
माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनका अनुसार देउवाको पक्षमा १४९ सांसदको हस्ताक्षर जुटेको हो । पुनका अनुसार कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ (एक स्वतन्त्रसहित), माधव नेपाल समूहका २७ र जसपाका १२ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नयाँ सरकार बनाउन संसदमा कायम २७१ सांसदमध्ये १३६ जना चाहिन्छ।